डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्- जन्मदिन मनाउने केकसँगै का’टिँदै’छ हाम्रो धर्म संस्कृति – ताजा समाचार
डा. अरुणा उप्रेती भन्छिन्- जन्मदिन मनाउने केकसँगै का’टिँदै’छ हाम्रो धर्म संस्कृति
केही समयअघि नयाँ शक्ति पार्टीले झन्डै ९१ किलोको बडेमान केक काटेर आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाएको थियो।
एक वर्षे बच्चादेखि हजुरआमा–हजुरबासम्मको जन्मदिनमा केक का’ट्दै खाइरहेका तस्बिर देखिन्छन्। संस्थाको वार्षिकोत्सव होस्, वा अरू केही सफलता, केक नै हुन्छ। अचेल त आमा–बुबाको मुख हेर्ने दिनमा पनि केक नै देखिन्छ।
केटाकेटीलाई त जन्मदिन भनेकै केक का’ट्ने भन्ने परेको छ। ठूला मान्छे पनि त्यही मनस्थितिमा छन्।
समाजको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले कस्तो बाटो देखाउँदैछन् ?
समयसँगै राम्रा परम्परा धानेर राख्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली संस्कृति बिर्सेका छौं। अन्य देशको संस्कृति देखासिकी गरेर केक का’ट्न थालेका छौं।
हामीकहाँ भने स्थिति उल्टो छ। बाहिरी संस्कृति यति हावी छ, आफ्नो संस्कृति नयाँ पुस्ताले बिर्सिन थालिसक्यो। विदेशी संस्कृति अपनाउनै हुन्न भन्ने होइन, तर त्यसमै बिलीन भएर आफ्नो पहिचान नै मासेर त्यसलाई बढावा दिनू भनेको आफ्नै खुट्टामा ब’ञ्चरो हा’न्नु हो।
विदेशमा बन्ने केकबारे म पुष्टि गर्न सक्दिनँ। तर, नेपालमा बन्ने धेरै केक अस्व’स्थ्यकर छन्। धेरै चिनी र वनस्पति घ्यूले भरिएको केक हाम्रा नानीबाबूले खाइरहेका हुन्छन्। उनीहरूको घरमा पनि केक नै का’टिन्छ, कतिपय स्कुलले पनि त्यही गरिदिन्छन्।
ती किताबमा सायद लेखिनेछ, ‘पहिले पहिले नेपालमा जन्मदिन मनाउँदा मालपुवा, खीर, हलुवा बनाएर ख्वाउने अचम्मको चलन थियो। धर्म र जातजाति अनुसार कसैले सेवइ खान्थे, खुवाउँथे, मन्दिरमा चढाउँथे त कसैले अन्डा सगुन दिन्थे। कसैले पूजा लाउँथे, कोही प्रार्थना गर्थे। यी परिकार घरमै पकाउने चलन थियो।’
केक नका’टौं भनेको होइन, स्वस्थकर केक खाऔं, आफ्नो संस्कृति नभुलौं!
सेतोपाटीबाट (लगभग एक बर्ष पहिले प्रकाशितलेख)